Sidee loo jarjiraa lo'da
Xayawaan kasta waa in si taxadar leh loo ilaaliyo. Iyo daryeelka ma aha oo kaliya in quudinta caadiga ah ee feed iyo beddelay qashin, laakiin sidoo kale in daryeelka ee muuqaalka xayawaanka. Halkan, tusaale ahaan, lo'du uma baahna in si joogta ah loo dhaqo loona nadiifiyo, laakiin sidoo kale in la jarayo haadka, iyo sidoo kale in la nadiifiyo cagaha.
Bulls: quudinta sifooyinka
Dabeecadda ayaa go'aamisay in duufaan uu dhalanayo, hal lo'du wuxuu noqon lahaa mid yar. Si aad ubadiso nolol cusub, waxaan sidoo kale u baahannahay shaag. Calaamadaha caafimaadka iyo wax soo saarka ee wakiilada xooluhu waxay si toos ah ugu tiirsan yihiin sida loo cuno oo loo quudiyo. Dhamaantood, si dufaanku u guto hawsheeda ugu weyn ee suurtogalka ah - bacrinta cunnooyinka, waa muhiim in la isku daro cuntooyinka cayayaanka oo dhan dhammaan qaybaha waxtarka leh iyo tamarta oo u gudbi doona caafimaadka galmada xoolaha.
Qaadashada lo'da: siyaabaha
Beeralayda waaweyn oo xoolaha lagu xannibo, waxaa jira dhowr siyaabood oo lagu ilaaliyo xayawaanka. Hababka mid kastaa wuxuu leeyahay sifooyin gaar ah, faa'iidooyin iyo faa'iido daro. Sidaa darteed, ka hor inta aanad dooran habka "nool" ee lo'daada, xitaa iyadu kaligeed, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u barato dhammaan macluumaadka, miisaamiso faa'iidada iyo khasaaraha.
Yaroslavl oo ah lo'da
Caanuhu waa badeecad aad uwanaagsan oo nolosheena bilawday. Waxay awood u leedahay inay gudbiso dhammaan qaybaha ugu muhiimsan ee nolosha iyo horumarka. Sababtaas awgeed xoolo badani waa lo'da lo'da. Cunto noocan oo kale ah, xitaa marka lagu hayo daaqsasho lacag la'aan ah, ayaa awood u leh inay ku farxaan sayidadooda iyaga oo leh saami aad u sarreeya oo caano subag leh.
Cudurada qafiska ee lo'da: sida loo aqoonsado iyo daaweynta
Beeraley wanaagsan ayaa ogyahay in uunan ahayn fardo, laakiin sidoo kale lo'da waxay u baahan yihiin in ay isha ku hayaan hooves. Fikrad gaar ah waa in la siiyaa qeybtaan ka mid ah jirka lo'da ee xilliga qaboobaha, marka xayawaanku inta badan ku jiraa gudaha. Xilliga xagaaga, ma jiraan wax dhibaato ah oo la jarayo iyo nadiifinta cayayaanka, sababtoo ah waxay ku xiran yihiin si joogto ah dabiiciga ah.
Caws engegan oo caano ah
Qoysaska iyo beeraha, lo'da ayaa inta badan laga helaa ujeedooyinka caanaha. Tani ma aha jihada kaliya ee wax soo saarka ee lo'da, laakiin waa ka faa'iido badan oo xasilloon marka loo eego dakhliga. Xaqiiqdii, in badan oo naga mid ah, caanaha iyo alaabada caanaha ayaa ah saldhigga cuntada, taas oo awood u yeelan karta in uu jirka ku baddalo waxyaabaha ugu muhiimsan ee muhiimka ah.
Adhiga uurka leh: waxa aad u baahan tahay inaad ogaato
Kuwa adhiga u yaqaan si hubaal ah in xayawaanka xoolaha ay tahay shaqo aad u faa'iido leh. Haddii aad haysato ido, markaa si joogto ah ayaad u heli doontaa waxyaabaha caanaha iyo hilibka, dhogorta. Faa'idadu waxay kordhi doontaa haddii, marka lagu daro idaha, in ay jilaan iyo dhalinyaro. Waxaa laga iibin karaa ama ka tagi kartaa deyrkaaga, adoo kordhinaya tirada xoolaha.
Sida loo fuulo fardaha
Fasaxyada ayaa si gaar ah loogu jecel yahay qoysaska, gaar ahaan tuulooyinka. Xayawaankan waxaa loo adeegsadaa sidii xoog ku ah gaadiidka alaabta. Intaa waxaa dheer, xiriirka fardo waa mid aad u wanaagsan caafimaadka, maadaama xayawaankan xayawaanka ah ay awoodaan inay nagu keenaan dareeno badan oo wanaagsan.
Maraq weyn: sifeynta caanaha caanka ah
Dhibcaha magaca leh "Giant" ayaa dhawaan la soo raray. Waxaa la aaminsan yahay in kii ugu horreeyay ee noocan ah uu ku dhashay 1952 ee dhulka ku yaal gobolka Poltava. Ujeedada ugu weyn ee abuurida noocaan xayawaanka ah ayaa ah rabitaanka baahida loo qabo baahida dadwaynaha cuntada sababo la xiriira xaaladda adag ee dhaqaale ee sanadaha ka dambeeya dagaalka.
Cunnaanta lo'da waa mid ka mid ah qaybaha ugu nugul ee jirka. Sida candho xoolo ah, waxaad ogaan kartaa in xayawaanka ay caafimaad qabaan iyo sida ay u dareemeyso. Haddii uu candho xoolo bararayo, uu noqdo mid aad u kulul, ama waxaa jira isbeddelo kale oo dibedda ah oo wajiga waji leh, ka dibna dhakhtar xoolaha waa in si dhakhso ah loogu yeero si loo soo gabagabeeyo xaalada guud ee xayawaanka.
Lambarada-Agoonta: sida loo koro dhalinyaro
Mararka qaarkood waxaa dhacda in baruurta dhalida yar ay hooyadooda lumiso. Tani waxay dhacdaa sababo badan, tusaale ahaan, iduhuu diiday ama ma quudin karo ilmaha. Ama midduu dhintay markii uu dhasho. Maxaa la samaynayaa kiiskan? Aad u fudud Waxaa jira dhowr siyaabood oo ka mid ah xaaladan. Qalabkani wuxuu u go'ay iyaga.
Cudurada ugu waaweyn ee lo'da: calaamadaha, daaweynta, ka hortagga
On beeraha waaweyn ee caanaha, inta badan, waxaa jira xoolo xoolo oo si dhow ula socdaan xaaladda xayawaanka. Kadib, waxaa jira cuduro si weyn u yareyn kara tirada lo'da. Waxaa la ogyahay in cudurku uu ka wanaagsan yahay in laga hortago in la daaweeyo, maadaama lacag badan loo isticmaali karo daawooyinka xoolaha.
Jersey jinsi ah lo'da
Maalinta wanaagsan ee akhristayaasha qaaliga ah! Miyaad ka fikirtay waxa ugu fiican ee lo'da ugu fiican? Dabcan, qof kastaa wuxuu jeclaan lahaa in uu ku beero beertiisa sida lo'da, taas oo bixisay faa'idada ugu sarraysa qiimaha ugu hooseeya. Laakiin tani waa mid waxaana la yiraahdaa Jersey. Haddii aad si lama filaan ah u shaki qabtid, markaa maqaalkani waa inuu ka saaro shaki.
Beeraha qumbaha ayaa si wayn u caan ah beeralayda. Marka hore, marka la barbar dhigo xayawaanka kale ee beeraha, intooda badani uma baahna dhibaatooyin gaar ah oo ku saabsan daryeelka iyo quudinta. Marka labaad, aad u sarreeya. Ugu dambeyntii, waxay leeyihiin hilib iyo maqaarka delicious, kuwaas oo si fudud loo iibsaday.
Khudaarta Rizen ee jilicsan waa farcanka Flanders, kuwaas, oo ka dhalatay guusha guuleysiga, waxay heshay muuqaal cajiib ah casriga ah. Caanaha waxaa laga soo saaray Germany. Ka tarjumay Jarmalka Jarmalka macnihiisu waa mid aad u weyn, oo aad u weyn. Tani waa run. Baaxadiisu waxay ku raaxeeysataa xitaa beeralayda caanka ah. Tilmaamaha Kuwani waa xayawaan aad u fiican, xasilooni leh oo xeel dheer.
Arag muuqaal ah, lugaha gaaban, dhegaha dhulka - tani waa sawir mid ka mid ah bakaylaha ugu fiican - bakiyaanka baran. Waxay yihiin kuwo fiican oo saaxiibtinimo. Iyo tayada wax soo saarka - khabiir dhab ah oo beeralayda ah. DESCRIPTION Dibedda baran waxay ka tirsan tahay nuucyada hilibka lo'da. Miisaanka celceliska waa 6 kg. Waxay leeyihiin jir jilicsan, gadaashu waxay ka bilaabataa qoorta waxayna yar tahay mid dildillaac ah.
Khamiisyada flandriga (ama weynaha Belgian)
Qaar badan ayaa ka fikiraya bakaylaha bakaylaha sababtoo ah xajin fool xun iyo jirkeedu yar yahay. Laakiin waxaa jira taageerayaal ah Flandrov caleenta. Inkasta oo ay muuqaal weyn iyo muuqaal muuqaal ah, waxay yihiin kuwo naxariis badan. Sawir dhererka dhererka jirka ee buuggan waa 65 cm, jidhka laftiisa waa la jiiday, oo la jarjaray.
Beeralayda aan ogayn waxa caleemaha Ayrsh ee lo'da u ekaa waxay arki karaan sawirro taxane ah oo ku saabsan Uncle Feodor iyo bisad Matroskin. Lo'da ay abuurtay filimayaashu waxay aad ugu egtahay lo'da Ayrshshire. Abuurayaasha kartuunku ma aysan ka fekerin xaqiiqda ah in lo'da Murka ay si buuxda u egtahay dhamaan sifooyinka caan u ah Ayrshka.
Khamriga caleemadani waa boqorrada tayada dhogorta leh. Maqaarkooda waxaa lagu qiimeeyaa dhogor gaar ah. Midabka duurjoogta ah wuxuu leeyahay timo madow oo dhif ah. Waxyaabaha laga soo qaaday dhogorta Rex ee bakaylaha waxaa si fiican looga iibsaday dalka iyo dibaddaba. Miisaankoodu waa 3-5 kg.
Khamrigu wuxuu dhali karaa Kaliforniya: maxaa u gaar ah?
Xaqiiqdii, waxaad arkeysid bakaylaha cadcad ee caanaha leh dhagax madow, oo ah madow madow sanka iyo lugaha isku midka ah. Way suura-gali wayday inaanan jeclayn! Haa, waa kan kaniisadda caanka ah ee California! Qof kastaa wuxuu jeclaan lahaa in uu leeyahay xayawaan noocaan oo kale ah! Tani waa mid ku habboon beerista warshadaha, waa wax soo saar leh, gabayada bakaylaha noocan ah waxaa lagu faafiyaa soo saarida hilibka cuntada iyo furka quruxda badan.